स्थानीय नेतृत्वको खुबी | eAdarsha.com
स्थानीय नेतृत्वको खुबी
१. स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन भएको सय दिन बितेको छ। राजनीतिमा सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ। त्यसबेलासम्म विरोधीहरुले पनि कुनै टीका टिप्पणी र विरोध नगरेर उनीहरुको काम कुरा नियालीरहेका हुन्छन्। सय दिन बिते पछि उनीहरुको काम कुराबारे मानिसहरुले बोल्न थाल्छन्।
२. नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २० वर्षपछि भएको छ। २० वर्षको लामो अवधि पछि भएकाले निर्वाचनमा केही भाग्यमानीहरु बाहेक अरु अधिकांश त नयाँ अनुहारहरु विजयी भएर आएका छन्। विजयी भएकाहरु सम्पूर्ण प्रायः युवा छन्, शिक्षित छन् र केही गरौं भन्ने भावनाका छन्।
३. भरखरै चुनाव जितेर आएकाले उनीहरुमा उत्साह छ , सपना छ। धेरैसँग योजना पनि छ। व्यक्तिगत योजना नभए पनि चुनावको बेला निकालेको घोषणा पत्र त छ। धेरै जसोको घोषणा पत्रमा कहाँ कहिले के गर्ने भन्ने कामको फेहरिस्त छ। शुरुमा त्यही घोषणापत्र हेरेर पनि केही गर्न सकिन्छ।
४. तर यो सय दिनमा जहाँ जसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन। स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरु कहाँ के गर्ने भन्दै अलमलिएका छन्। कोही प्रशासनको जञ्जालमा घेरिएका छन्। केहीले शुरुमा मतदाताहरुलाई प्रभावित पार्न जे जस्तो सुविधाको घोषणा गरेका थिए। त्यो ऐन कानूनसँग बाझिएको भनेर मन्त्रालयले रोकेको अवस्था छ।
५. पदाधिकारीहरु निश्चय नै पार्टी पार्टीबाटनिर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधि हुन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीहरु पार्टी ो भन्दा सबै मतदाताहरुका साझा भएका छन्। तर उनीहरुले आफू सबैको साझा भएको कुरा कामबाट देखाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा पक्ष विपक्षहरु प्रष्ट देखिने गरेका छन्।
६. राजनैतिक सिद्धान्तको अर्थात् पार्टी त भावना त्यहाँ केही मात्रामा देखिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर नेतृत्वमा बसेकाले कामको बाँडफाँड गर्दा आफ्नो पार्टी ो मान्छेलाई मात्र नहेरी योग्यता, अनुभवको आधारमा सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। सबैलाई भाग दिने प्रयास गर्नुपर्दछ र सबैको सहयोग लिने प्रयास गर्नुपर्दछ। जति सहयोग प्राप्त हुन्छ, उति त्यो सफल हुन्छ।
७. कतिपय नेतृत्वमा रहेकाले त्यसो नगर्दा शुरुमा नै राजनैतिक विभाजन देख्न थालिएको छ। विरोधको स्वर भित्रैबाट आउन थालेको छ। स्थानीय तह विकास निर्माणका लागि बनाइएको हो। विकास निर्माणको काममा राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने मूल मन्त्रलाई सम्झेर काम गर्नुपर्दछ। काम गर्दा जसले काखा र पाखा गर्दैन उसकै नेतृत्व सफल हुन्छ। सबैलाई समेट्नु नेतृत्वको खुबी हो। स्थानीय तहमा त्यो खुबी देखाउनु नितान्त आवश्यक छ ।